Ilaahay wuxuu rabaa inaan adduun janno ah weligeen farxad iyo nabad ugu noolaanno!
Laakiin waxaad is oran kartaa sidee bay taasi u suuraggali kartaa? Kitaabka Quduuska ah waxaa ku qoran inay waxan Boqortooyada Ilaahay keeni doonto. Waana Ilaahay doonistiisa inay dadka oo dhan aqoon u yeeshaan Boqortooyadaas iyo ulajeeddada uu Ilaah inoo hayo.—Sabuurradii 37:11, 29; Ishacyaah 9:7.
Ilaahay wuxuu inala rabaa waxa inoo wanaagsan.
Siduu aabbe wanaagsan carruurtiisa waxa ugu wanaagsan ula rabo buu Ilaahayna sidoo kale u rabaa inaan weligeen farxad ku noolaanno. (Ishacyaah 48:17, 18) Ilaahay wuxuu ballanqaaday “kan doonista Ilaah yeelaa wuu jirayaa weligiis.”—1 Yooxanaa 2:17.
Ilaahay wuxuu rabaa inaan waddadiisa xajino.
Abuureheenna “wuxuu ina bari doonaa jidadkiisa” ayaa ku qoran Kitaabka Quduuska ah sidaynu “waddooyinkiisa” ugu socono. (Ishacyaah 2:2, 3) Ilaahay dad buu abaabulay “magiciisa aawadiis” siday doonistiisa adduunka oo dhan u ogeysiiyaan.—Falimaha Rasuullada 15:14.
Ilaahay wuxuu rabaa inaan caabudaaddiisa ku midowno.
Caabudaadda Yehowah oo saafiga ah dadka waxay ku mideysaa jacayl oo ma kala saarto. (Yooxanaa 13:35) Yaa maanta dadka meel kasta jooga baro inay Ilaahay midnimo ugu adeegaan? Ka hel jawaabta buuggan.
Nala baro Kitaabka. Kitaabka Quduuska ah ma la barataa Markhaatiyaasha Yehowah? Haddaadan weli la baran maad jeclaan lahayd inaad bilaa lacag ula baratid? Waxaad garan doontaa inay tahay si wanaagsan oo ad Ilaahay ugu dhowaan kartid.
Bilaa lacag u hel wargeysyo. Sidaad u codsatid wargeysyo luqaddaada ku qoran oo Bibleka ku baraya waxaad aadi kartaa Hoolka Boqortooyada kugu dhow ama mid ka mid ah Markhaatiyaasha Yehowah ayaad ka codsan kartaa.
Online ka baro waxa nagu saabsan. Booqo websiteka rasmiga ah ee Markhaatiyaasha Yehowah. Halkaas ka akhriso Bibleka iyo wargeysyo lagu turjumay in ka badan 750 oo luqadood oo ad daabacan kartid.
Sidee Baa Loo Dhigtaa Kitaabka Quduuska ah?
Wadaag Wadaag Maxay Tahay Doonista Ilaahay?